LLC निर्देशक संग काम सम्झौता
एक हात मा प्रतिनिधित्व विशिष्ट कर्मचारी को टाउको,, कम्पनी को चासो, र अन्य मा - अभिनय कर्मचारी।
यो दोहोरो कानुनी स्थिति करार वा कम्पनी निर्देशक संग एक रोजगार सम्झौता भंग जहाँ एक अवस्थामा केही सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।
कम्पनी को टाउको आफ्नो एकमात्र कार्यकारी शरीर रूपमा सेवा गर्न अनुसार यस संविधान कागजातहरू वा व्यवस्था अन्तर्गत संगठन को व्यवस्थापनमा संलग्न एक प्राकृतिक व्यक्ति, साथै छ। आधिकारिक व्यक्ति अधिकृत कि, एक कर्मचारी व्युत्पन्न छन् जो आफ्नै निर्णय, गर्न सही छ - हामी नेता भनेर बिर्सनु हुँदैन रोजगार को सम्बन्ध। व्यापार संस्थाहरू , अलग डिभिजनका वा अधीनस्थ सहायकहरूले छ LLC सामान्य निर्देशक संग एक रोजगार सम्झौता प्रवेश। यो काम शिर्षक संविधान कागजातहरू द्वारा तय गर्नुपर्छ।
यो कानून टाउको को पोस्ट को लागि विशिष्ट आवश्यकताहरु स्थापना बताए गर्नुपर्छ। यो व्यक्ति एक विश्वविद्यालय डिग्री छ र पाँच अधिक वर्ष को लागि नेतृत्व स्थितिहरु मा काम गर्नु पर्छ। क्वालिफाइङ विशेषताहरु लागि प्रदान आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन मान्छे, अनुभव र शिक्षा लेना अनुमति एउटा अपवाद रूपमा।
सामान्यतया, LLC र अन्य व्यापार संगठन, व्यावसायिक योग्यता गुणस्तर प्रबन्धक को Supervisory बोर्ड वा सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित छन् जो स्थानीय कानुनी प्रेरित, मा दर्ता हुन सक्छ।
LLC निर्देशक संग एक रोजगार सम्झौता प्रवेश जो एक प्रक्रिया हो, कानुनी निकायहरूको कानुनी संगठनात्मक प्रकारका निर्भर गर्दछ। त्यसैले लिमिटेड व्यक्ति एकल-handedly पूरा अनुसार सामान्य सभामा संघ को लेख वा निर्देशक को बोर्ड संग निर्वाचित अख्तियार को कार्यकारी कार्यहरु। यस मामला मा, निर्देशक कम्पनी, तेस्रो-पक्ष एकाइ को एक गैर-सदस्य नियुक्त हुन सक्छ।
एक सरल मतदान को परिणाम देखाउँछ जो निर्णय सामान्य बैठक वा निर्देशक को बोर्ड मा लिइएको, को मिनेटमा दर्ता। वोट को बहुमत निर्देशक को नियुक्तिका लागि पर्याप्त छ।
को कर्मचारी कम्पनी निर्देशक संग नयाँ श्रम सम्झौता तर्फबाट निर्देशक को बोर्ड को अध्यक्ष द्वारा countersigned (नमूना थुप्रै स्रोतहरूमा समीक्षा लागि उपलब्ध छ)। यस आधारमा रोजगारीको सम्झौतामा हस्ताक्षर पछि बैठक को मिनेट कम्पनी को टाउको पोस्ट नै गर्न नियुक्ति मा आदेश जारी गर्नेछ। आदेश कानुनी कार्य हो किनभने यो प्रक्रिया आवश्यक छ।
रोजगार सम्झौता उहाँलाई नियुक्त टाउको कार्यालय काम अनुपालनको जाँच गर्न - कम्पनी निर्देशक संग प्रारम्भिक परीक्षण सर्तहरू समावेश हुन सक्छ। यसबाहेक, यस अवधि तीन महिना भन्दा लामो हुन सक्दैन। साथै, संस्थापक कागजातहरू मा एक विशेष प्रक्रिया सेट गर्न सकिन्छ टाउको (जस्तै, खुला वा बन्द प्रतियोगिता) को कार्यालय, साथै उम्मेदवार विशिष्ट मापदण्ड को योग्यता मानेर अघि। तथापि, रोजगार सम्झौता को निष्कर्ष अघि प्रतियोगिता बेला सम्झौता मा परिवीक्षाधीन को सर्त छैन प्रविष्ट गरिनेछ।
कम्पनी को निर्देशक संग काम सम्झौता निष्कर्षमा भने, प्रतियोगिता सञ्चालन, र बिना को संस्थापक कागजातहरू उम्मेदवारको चयन लागि एक अनिवार्य मापदण्ड रूपमा यो अवस्था, यस्तो सम्झौता एक पोस्ट गर्न भर्ना को नियम उल्लङ्घन आधारमा बर्खास्त पर्छ भनेर समावेश गर्दछ।
निर्देशक संग काम सम्झौता LLC यसको प्रभाव संविधान कागजातहरू वा दल को सम्झौता मा दर्ता गरिएको छ, एक शब्द छ। सामान्यतया, यो अवधि पाँच वर्ष भन्दा बढी छैन।
सम्झौता (सम्झौता) को व्यवस्था भुक्तानी क्षतिपूर्ति अन्तर्गत आफ्नो दोषी टाउको को अभाव मा मालिक कम्पनी को अनुरोध मा को प्रारम्भिक समापन मामला मा, राशि जो को सम्झौता निर्दिष्ट गर्नुपर्छ।
रूसी संघ को नागरिक को नयाँ इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट: को रसिद, समय र आपत्ति
इन्टरनेट मार्फत एक cadastral राहदानी कसरी आदेश?
र कसरी हल्याण्ड एउटा भिसा प्राप्त गर्न
को स्टाफ स्वीकृत आदेश
कसरी नाम को परिवर्तन हो? दर्ता लागि आवश्यक कागजातहरू
एक बच्चा पेन्सन लागि प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गर्न
स्याउ देखि एक घर बनाएको रक्सी कसरी तयार
मास्को - Maloyaroslavets: रेल
बालिका र केटाहरू लागि छोराछोरीको डाक्टर पोशाक कसरी बनाउने?
Mediodia होटल3* - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
व्लादिमीर Efremov (भौतिक) - नैदानिक मृत्यु बाँचे मानिस: सनसनीपूर्ण खुलासे
होटल लुआ Language नोवा (भारत, गोवा): होटल को वर्णन, मूल्यांकन
चेल्याबिन्स्क क्षेत्र। "Zyuratkul" (मनोरञ्जन केन्द्र)
होटल "क्रिस्टल", एडलर: तस्बिर र समीक्षा
योजना herringbone चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको। एक क्रिसमस गारलैंड कसरी बनाउने?
कम carb खाद्य पदार्थ र आहार
नुस्खा: खट्टे दूध संग पेनकेक्स